သန်းကြွယ်၊ ဦး (မြို့မ) - ဝီကီပီးဒီးယား
(မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
၂.၁ ဂျပန်ခေတ် အာရှလူငယ် အစည်းအရုံးကာလ
၂.၃ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု ကာလ
၂.၄ ၁၉၄၆ ခုနစ် အထွေထွေ သပိတ်
၂.၅ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က"လမ်းနှစ်ခွ" မိန့်ခွန်းတွင် ချီးကျူးခဲ့သည်
၃ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် ပင်လုံစာချုပ် နှင့် ပင်လုံညီလာခံ
၄ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးအာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား
ဂျပန်ခေတ် အာရှလူငယ် အစည်းအရုံးကာလပြင်ဆင်
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု ကာလပြင်ဆင်
၁၉၄၆ ခုနစ် အထွေထွေ သပိတ်ပြင်ဆင်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က"လမ်းနှစ်ခွ" မိန့်ခွန်းတွင် ချီးကျူးခဲ့သည်ပြင်ဆင်
မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် ပင်လုံစာချုပ် နှင့် ပင်လုံညီလာခံပြင်ဆင်
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်သည်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဆာမောင်ကြီး၊ ဗိုလ်မှူးအောင်၊ ဦးအောင်ဇံဝေ၊ ဦးတင်ထွဋ်(အိုင်စီအက်စ်)၊ ဗိုလ် ခင်မောင်ကလေး၊ သခင်ဝတင် နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် အတူ ပင်လုံညီလာခံ တွင်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင် လူကြီး၊သက်ကြီးတက္ကသိုလ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင် လူကြီး၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရေးရာ ဌာနမှူး၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်လူကြီး၊လူငယ် နှင့် ကျောင်းသားလူငယ်ရေးရာ ဌာနမှူး၊  မြို့မကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင် လူကြီးနှင့်သုံးခွမြို့နယ် အသင်းနာယကကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။
မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးအာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားပြင်ဆင်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့သည် အာဇာနည်နေ့ဖြစ်သည်။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ သခင်မြ၊ ဒီးဒုတ် ဦးဘချို၊ ဦးရာဇတ်၊ ဦးဘဝင်း၊ မန်းဘခိုင်၊ မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီး စဝ်စံထွန်းတို့သည် တိုင်းပြည်၏တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိနေစဉ် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ အောင်မြင်မှုကို မနာလိုဝန်တိုဖြစ်လျက်ရှိကြသော လူမသမာတစ်စု၏ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရလေသည်။ ထိုအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့နှင့်အတူ တိုင်းပြည်၏ တာဝန်ဝတ္တရားနှင့် အမှုကိစ္စတို့ကို သစ္စာရှိစွာ ထမ်းရွက်နေသော အတွင်းဝန် ဦးအုန်းမောင်နှင့် ကိုယ်ရံတော် မောင်ထွေးတို့လည်း ကျဆုံးခဲ့ရလေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှူး ပြုသော အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံရပြီးနောက်တစ်နေ့ ၁၉၄၇၊ ဇူလိုင် ၂၀ တွင်ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေဘုရားအနီးရှိ ဖိုက်စကွဲယား (ယခု) မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံ၌ နိုင်ငံတော်ဈာပနဗဟိုကော်မတီဝင် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်သည် ကျောင်းသားနှင့်ပြည်သူတစ်သိန်းကျော်ကိုဦးဆောင်ပြီး "လူသတ်ဝါဒရှုတ်ချပွဲ" ကို စတင်ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုနေ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဦးဆုံး အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားဖြစ်သည်။ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်ကို အာဇာနည်နေ့အဖြစ် နှစ်စဉ် အခမ်းအနားကျင်းပကြသည်။
၁၈.ဇူလိုင်လ.၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ကရိလမ်း(ဗိုလ်မြတ်ထွန်း လမ်း) နေ ဟင်္သာတမြို့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဥက္ကလာဦး စေတီဘုရားတကာ ဦးဘဦး နှင့် ပေါင်းတည်မြို့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဒေါ်တင်လှ (ပန်းကန်စက်ဦးသော် ၏ညီမအရင်း) တို့၏သမီးဖြစ်သူ မြို့မကျောင်းသူဟောင်း ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း (ခေါ်) ဒေါ်အမာ နှင့် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့သည်။ ဒေါ်တင်လှသည် မြန်မာ့သမိုင်းတွင်ထင်ရှားသော ဆင်ဖြူရှင်မင်းနှင့် မြန်မာစစ်သူကြီး မင်းကြီးမဟာသီဟသူရ တို့၏ (၂) ဆက်မြောက် မြေးတော် ဖြစ်သည်။ ဇနီးဖြစ်သူမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အထူးကိုင်းရှိုင်း သော အမျိုးသမီးကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး ဆွေကြီးမျိုးကြီးဖြစ်သော်လည်း မည်သူ့ကိုမျှ မောက်ကြွားဝင့်ဝါခြင်းမရှိ၊ မာန်မာနထားခြင်းမရှိ၊ ခြိုးခြံစွာကျင့်သုံးနေထိုင်၍ လှူသင့်လှူထိုက် ပေးသင့်ပေးထိုက်သူအား ရက်ရောစွာ ပေးကမ်းလှူဒါန်းတတ်သည်။ လူကြီး-လူငယ်မရွေး၊ ဆင်းရဲ-ချမ်းသာမရွေး၊ လူမျိုး-ဘာသာမရွေး လူအားလုံးကို မေတ္တာစိတ်ဖြင့် လှိုက်လှဲပျူငှာစွာ ဆက်ဆံပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ ၏ အဆုံးအမ တရားတော်တို့ကို ပုံပြင်ဝတ္တုများဖြင့် သားသမီးများကိုသာမက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၊ လူငယ်များအား မကြာခဏ ရှင်းလင်းပြောပြလေ့ရှိသည်။ ဘာသာရေးသာမက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ များ၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် မြင့်မားရေးဆိုင်ရာများ၊ လူမှုရေးဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ဝတ္တရားများ၊ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ သည်းခံခြင်းနှင့် ကိုယ်ကျင့်သီလဆိုင်ရာများ ရှင်းလင်းသင်ပြလေ့ ရှိသည်။ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရားကို ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ခန့်မှ ကွယ်လွန်ချိန် ၂၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ထိ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် ကျင့်ကြံအားထုတ်လျက်သော ဝိပဿနာယောဂီ ဖြစ်သည်။
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ သမဂ္ဂဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်ခရိုင် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်မြို့မကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ
↑ ၁.၀ ၁.၁ မြို့မ-မြင့်ကြွယ် (၁၀-၂-၂၀၁၉). "ထင်ရှားသောမြို့မဟောင်းကြီးများ". မြန်မာတိုင်းမ် MYANMAR TIMES DAILY အတွဲ (၃) (မြို့ပြသမိုင်းကြောင်း).
↑ မြို့မ-မြင့်ကြွယ် (၁၂-၂-၂၀၂၀). "သမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ်နှင့် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်". မြန်မာတိုင်းမ် MYANMAR TIMES DAILY အတွဲ (၄): စာမျက်နှာ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆.
↑ ၁၉၉၅၊ မြို့မ မဂ္ဂဇင်း။ မြို့မ မဂ္ဂဇင်း ၁၉၉၅။ မဂ္ဂဇင်းအတွင်းရေးမှူး ဆရာမဒေါ်ခင်ဆွေ။ CS1 maint: numeric names: authors list (link)
↑ ၁၉၉၆၊ မြို့မ မဂ္ဂဇင်း။ မြို့မ မဂ္ဂဇင်း ၁၉၉၆။ မဂ္ဂဇင်းအတွင်းရေးမှူး ဆရာမဒေါ်ခင်ဆွေ။ CS1 maint: numeric names: authors list (link)
↑ ၁၉၉၃-၂၀၀၀၊ မြို့မ မဂ္ဂဇင်း။ မြို့မ မဂ္ဂဇင်း ၁၉၉၃-၂၀၀၀။ မဂ္ဂဇင်းအတွင်းရေးမှူး ဆရာမဒေါ်ခင်ဆွေ။ CS1 maint: numeric names: authors list (link)
↑ Burma - The Struggle for Independence, 1944-48: From General Strike to Independence, August 31, 1946 to January 4, 1948 v. 2: Documents from Official and Private Sources book ...
↑ သန်းဝင်းလှိုင် (၁၁ မတ် ၂၀၁၂)။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲများအား စစ်တမ်းထုတ်ကြည့်ခြင်း။ 20 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Aung San - Alchetron, The Free Social Encyclopedia
↑ ၂၀၀၂-၂၀၀၃၊ မြို့မ မဂ္ဂဇင်း။ မြို့မ မဂ္ဂဇင်း ၂၀၀၂-၂၀၀၃။ မဂ္ဂဇင်းအတွင်းရေးမှူး ဆရာမဒေါ်ခင်စန်းမြင့်။ CS1 maint: numeric names: authors list (link)
↑ သန်းဝင်းလှိုင် (၂၀၁၆၊ ဩဂုတ်လ)။ နှစ် ၃၀ဝ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အဘိဓာန် (တတိယအုပ်)။ စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ။ p. စာမျက်နှာ ၃၂၈-၃၂၉။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
↑ Burmese Martyrs’ Day | History and Life
↑ မြို့မ-မြင့်ကြွယ် (၁၃-၂-၂၀၁၉). "သမိုင်းဝင် ပင်လုံစာချုပ်နှင့် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်". မြန်မာတိုင်းမ် MYANMAR TIMES DAILY အတွဲ (၃) (သမိုင်းမှတ်တမ်းသတိတရ).
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 12 February 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ History of Myanmar[လင့်ခ်သေ]
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 14 May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar : Book Review - Making Enemies: War and State Building in Burma။ 12 August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myoma U Than Kywe[လင့်ခ်သေ]
↑ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မြို့မကျောင်း စိန်ရတု အထိမ်းအမှတ်စာအုပ်
↑ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတု အထိမ်းအမှတ်စာအုပ်
↑ ၂၀၀၅ မြို့မ-မြင့်ကြွယ် ရေးသားသော မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အထူးမှတ်သားဖွယ်နှင့် လူငယ်ရေးရာ မှတ်စုများ စာအုပ်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သန်းကြွယ်၊_ဦး_(မြို့မ)&oldid=700281" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။